၁၉၃၂ ၏ဝိညာဉ်တော်: Chanel - မြင့်မြတ်သောအိပ်မက်များ
Chanel အမြင့်ရတနာ သမိုင်းနှင့်အမွေအနှစ်
1932 ၏ဝိညာဉျကို: Chanel
2012 သည် မြင့်မားသော လက်ဝတ်ရတနာများ၏ ကုဒ်များအားလုံးကို ချိုးဖျက်နိုင်သော စုစည်းမှုတစ်ခုအတွက် အားကောင်းသော ပြန်လည်နိုးထလာမည့်နှစ်ဖြစ်သည်။
အောက်တိုဘာလ 30, 2014
နိုဝင်ဘာလ 1932။ Miss Chanel သည်သူမ၏ပထမ ဦး ဆုံး High Jewelery collection ကို Paris ရှိ Faubourg Saint-Honoréရှိသူမ၏အိမ်ကြီးတွင်“ Bijoux de Diamants” ဟုတင်စားခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။
သူမရေးသားထားသော“ စိန်၏တောက်ပမှုနှင့်အသေးငယ်ဆုံးအရွယ်အစားအတွက်အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးကိုကိုယ်စားပြုသည်” ဟုရေးသားခဲ့သောစိန်၏တောက်ပမှုနှင့်သန့်ရှင်းမှုကြောင့်သူမအနေဖြင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်လှပသောရတနာတစ်ခုလုံးကိုဖန်တီးခဲ့သည်။
“ Bijoux de Diamants” ၏နှစ် ၈၀ မြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကိုကျင်းပရန် CHANEL သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တစ်လျှောက်ကမ္ဘာအနှံ့ခရီးသွားခဲ့သည့်အမြင့်ဆုံးရတနာပစ္စည်းများစုစည်းထားသည့်ထူးခြားသောစုဆောင်းမှု ၈၀ ကိုဖန်တီးခဲ့သည်။
ပြန်လည်ပုံနှိပ်ထားသောနှင့်ပြန်လည်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူထားသောအပိုင်းများကိုပေါင်းစပ်ထားသည့်ယနေ့စုဆောင်းမှုသည် Art deco ၏အခင်းအကျင်းများ၊ ကြိုးများ၊ ကြိုးများ၊ အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်တန်ချိန်များသို့မဟုတ်စိန်၏နူးညံ့သောချည်မျှင်များနှင့်ဆက်စပ်သည်။
1932 ပြပွဲတွင် ဝတ်ဆင်ထားသော Franges လည်ဆွဲ။
ဤထူးခြားသောစုစည်းမှုအား အပိုင်းငါးပိုင်းဖြင့် ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီး တစ်ခုစီသည် စုစည်းမှု၏ မတူညီသောအကြောင်းအရာကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
ငါကြယ်တွေအတွက်အမျိုးသမီးတွေဖုံးလွှမ်းချင်တယ်! ကြယ်များ! အားလုံးအရွယ်အစားကြယ်များ ... Gabrielle Chanel
အဆိုပါ Star Necklace အားရိုက်ကူးခြင်း မူရင်းComèteလည်ဆွဲအသစ်၏အနက်ဖွင့်သည်။ Baguette ဖြတ်ထားသောစိန်များမှပြုလုပ်ထားသောသံကြိုးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဤအပိုင်းအစအားကြီးမားသောစိန်ကြယ်ပွင့်တစ်ခုကပခုံးသို့မဟုတ်အရံအပြားတွင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရာချထားနိုင်သည်။ ၎င်းသည် Mademoiselle Chanel အလွန်ချစ်ခင်တွယ်တာသောလွတ်လပ်မှုအတွက်ရှာပုံတော်ကိုသင်္ကေတဖြစ်သည်။
၁၉၃၂ ခုနှစ်တွင် Mlle Chanel မှဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောမူလComè Necklace ။ ဓာတ်ပုံ Robert Bresson
ဒီနေရာမှာတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် Comètလည်ဆွဲ၏ဒုတိယအနက် 1932 စုဆောင်းမှုမှ- လည်ပင်းကို သိမ်မွေ့စွာ ချည်နှောင်ထားပြီး 14.8 ကာရက်ရှိသော စိန်ပွင့်၏ အလယ်ဗဟိုတွင် ထူးခြားသောကြယ်၏အလင်းရောင်ဖြင့် တောက်ပနေသော လည်ချောင်းများ။
အနုပညာရဲ့သိသာထင်ရှားရိုးရှင်းတဲ့အလုပ်က၎င်း၏ကျေးဇူးတော်နှင့်အဓိပ္ပါယ်သက်သေဖြစ်ပါတယ်။ Gabrielle Chanel
Soleil လည်ဆွဲ၏အသေးစိတ်။ ဓာတ်ပုံ Julien Claessens & Thomas Deschamps ။
မူလက ၁၉၃၂ ခုနှစ်တွင် Mademoiselle Chanel's Collection တွင်တင်ပြခဲ့သည် Soleil ယခုအဖြူနှင့်အဝါရောင်စိန်ကြီးများဖြင့်ကျင်းပသောစိန်ကြိုးအမျိုးမျိုးတပ်ဆင်ထားသည့်လည်ဆွဲပေါ်၌သူ၏ဘုန်းအသရေအားလုံးပေါ်လာသည်။
18k ရွှေဖြူ၊ အဝါရောင်ရွှေနှင့်စိန်များဖြင့်လည်ဆွဲများ။
1932 မူရင်း Soleil brooch ။
Aubazine ရှိသူ၏ဘော်ဒါကျောင်း၌ကြမ်းခင်း၏ကြမ်းခင်းကြွေပြားများကိုသူမလေးစားမိသည့်အတွက် Gabrielle Chanel ၏စိတ်ကူးဖြင့်ဖန်တီးထားသည့်လည်ဆွဲအတွက်ကြယ်တစ်လုံး၊ လခြမ်းခြမ်းများနှင့်နေရောင်ခြည်များပါလာသည်။
ငါရတနာအမျိုးသမီးတစ် ဦး ရဲ့လက်ချောင်းပေါ်မှာဖဲကြိုးကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ် ... Gabrielle Chanel ။
အဆိုပါ လက်စွပ် ဤနေရာတွင်တင်ပြသည့်တစ်ခေတ်ပြိုင်အခွန်ဆက်ဖြစ်ရည်ရွယ်သည် လေး 1932 ခုနှစ်။ couture ၏ စိတ်ဓာတ်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော ဤအချိုးမညီသော ဒီဇိုင်းသည် "မွမ်းမံထားသော ဖဲကြိုး" အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ပါရှိသည်။
18k ရွှေဖြူနှင့် asher-cut စိန်များကိုတီးပါ။
ပျော့လိမ်နှင့်လက်ရာမြောက်သော volumes ကိုနှင့်တကွ, ပတ္တမြားလည်ဆွဲ ထူးခြားသော couture ခံစားမှုနှင့်အတူ ထူးခြားသော ဖန်တီးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အနက်ရောင် နှင့် အဖြူ စိန်များကို ပေါင်းစပ်၍ အဓိပ္ပါယ်ပြန်ဆိုသည်။ အထင်ကရဆနျ့ကငျြဘ ဒါက Mademoiselle Chanel အတွက်အရမ်းချစ်စရာကောင်းတယ်
18k ရွှေဖြူ၊ အနက်ရောင်စိန်များနှင့်စိန်ဖြူများတွင်လည်ဆွဲ။
1932 မူရင်းလေးလည်ဆွဲ၊ chocker နှင့် brooches (အောက်ပုံ)
ကြော့သည်မျဉ်းဖြစ်သည်။ Gabrielle Chanel
1930 ၏ဗေဒအားဖြင့်မှတ်သားသည် စမ်းရေတွင်းလည်ဆွဲ တောက်ပနေသည့်ရေတံခွန်နှင့် baguette ဖြတ်ထားသောစိန်များ၏ထူးခြားသောတီထွင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
မူရင်း ၁၉၃၂ စုဆောင်းမှုမှ VU၊ နိုဝင်ဘာ ၁၉၃၂ မှ Franges လည်ဆွဲ။
ဒီနူးညံ့သိမ်မွေ့သောနှင့်သိသိသာသာဟောက်နှစ်ဆယ်ဆယ်များ၏ရတနာစတိုင်မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းဂုဏ်ပြုတဲ့ Frange Cuff နူးညံ့သော baguette ဖြတ်ထားသောစိန်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောပတ် ၀ န်းကျင်စိန်များပါရှိသည်။ ဖန်တီးမှုသည်လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို လိုက်၍ လက်ကောက်ဝတ်တစ်ဝိုက်တွင်ရှိသည်။
18k ရွှေဖြူနှင့်စိန်အတွက် Cuff ။
ကြယ် Du ခြင်္သေ့
ငါလီယိုအမှတ်အသားအောက်မှာမွေးဖွားခဲ့တယ်။ Gabrielle Chanel
ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သော Chanel မြင့်ရတနာ၏ပုံသဏ္theာန်ဖြစ်သောခြင်္သေ့သည်ကျောက်ဆောင်ကြည်လင်သောခြင်္သေ့သည်စိန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြယ်တံခွန်ကိုသရဖူဆောင်းထားသောလှပသောတောင်ပေါ်တွင်ပြသထားသည်။
18k ရွှေဖြူ၊ ကျောက်ဆောင်နှင့်စိန်များတွင်လည်ဆွဲ။
အကယ်၍ ငါစိန်များကိုရွေးလိုက်ရင်၊ သူတို့ဟာအသေးငယ်ဆုံးပုံစံမှာအကြီးဆုံးတန်ဖိုးကိုကိုယ်စားပြုလို့ပဲ။ အရောင်တောက်တောက်တောက်တောက်တောက်ပမှုနှင့်ဖက်ရှင်ကိုပေါင်းစပ်ရန်ကျွန်ုပ်အားလှုံ့ဆော်ပေးသောအရာများကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ Gabrielle Chanel
Tags:1932 • နျစ်ပတ်လည်နေ့ • အခမ်းအနား • Chanel • ဟာသ • Gabrielle Chanel • စိတ်ဝင်စားခြင်း • ခြင်္သေ့သည် • soleil • ကြယ်ပွင့်
မှတ်ချက်3ခု1932 ၏ဝိညာဉျကို: Chanel"
Pingback: Chanel: '၁၉၃၂ ၏သင်္ကေတ' | HIGH ရတနာအိပ်မက်
Pingback: Chanel မှ "1932" - Patrice Leguéreau နှင့်အင်တာဗျူး - HIGH JEWELERY DREAM
Pingback: ဗီဒီယို - "ငါက Bijoux de Diamants စုစည်းမှု" - Chanel - HIGH JEWELERY DREAM